Filtrer les éléments par date : lundi, 22 juillet 2019
lundi, 22 juillet 2019 22:16
Kitra – Barea JIOI: Napetra-pialana i Rôrô, mpanazatra
Miaiky i Rakotondrabe Romuald na Rôrô, mpanazatra Barea JIOI, fa isany tomponandraikitra ny tenany matoa tsy tafita amin’ny manasa-dalana ny Barea amin’ny fiadiana ny tompondakan’ny ranomasina indianina amin’ny baolina kitra.
Nanapa-kevitra ny tenany fa « hiala amin'ny toerana maha mpanazatra satria tsy nahomby ».
lundi, 22 juillet 2019 22:06
Kitra – Lalaon’ny Nosy: Nihintsana tamin’ny antsapaka ny Barea JIOI
Tapitra ny dian’ny Barea teo amin’ny Lalaon’ny Nosy. Tafita ho amin’ny dingan’ny manasa-dalana i Seisela taorian’ny antsapaka natao io hariva io tao amin’ny hotely Intercontinental, namantarana izay hiaraka amin’i Maurice hanohy ny lalao amin’i Madagasikara sy Seisela izay nitovy isa tao amin’ny vondrona A.
Samy in-droa nanao ady sahala i Madagasikara sy Seisela, mitovy ny elanelan’ny baolina niditra sy tafiditra tamin’ny ekipa roa tonta. Niditra tamin’ny antsapaka, araka ny voalazan’ny lalàna mifehy ny lalao. Tafita i Seisela, tapitra hatreo ny lalana ho an’ny Malagasy.
lundi, 22 juillet 2019 21:28
Ambohipo: Lasan'ny mpanam-bola ny tany nokarakaraina efa ho 50 taona, noravana ny trano
Tamin'ny zoma 19 jolay vao maraina dia voahodidina polisy ny toerana, niditra an-tsehatra ny vadintany, ireo mpiasan'ny mpandrefy tany, ary ireo mpiasa marobe nandrava ny fefy, nanapaka ny hazo sy ny zaridaina, ary nandrodana ny trano, mifanefitra amin'ny cité SEIMAD.
Niditra an-tsehatra ny fokontany, fa dia niala maina fa nanana didy avy amin'ny fitsarana ny vadintany, ka dia tsy nisy ora 4 dia rava tanteraka ny trano.
Ny tany mifanila amin'ny cité SEIMAD dia toerana maitso, ary raha misy aza ny famarotan'ny SEIMAD ireny toerana ireny, dia tokony ireo efa mipetraka sy mikarakara ny tany no anontaniana voalohany raha hividy, fa tamin'ity raharaha ity, raha ny filazan'ny rava trano, dia tsy nisy izany, fa ny SEIMAD aza milaza fa tsy amidy ireny faritra ireny.
lundi, 22 juillet 2019 17:08
Governemanta: Iza no voatery handao ny samboben’i Ntsay Christian?
Andrasana amin’ity herinandro ity ny fijoroan’ny governemanta vaovao, tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian. Hisy ny olom-baovao hiditra raha ny loharanom-baovao. Iza no voatery handao ny samboben’i Ntsay Christian, taorian’ny tomban’ny asa vita tao anatin’ny enim-bolana nisian’ny governemanta voalohany, tamin’izao fitondrana Andry Rajoelina izao ? Mety hotazomina ny isan’ny ministera ho taratry ny fitsitsiana, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Miankina amin’izay governemanta vaovao hijoro eo rahateo ny fandraisana ny didim-panjakana hiantsoana ny mpifidy raha hotanterahina amin’ny 28 oktobra 2019, araka ny tolo-kevitry ny CENI ihany ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna.
lundi, 22 juillet 2019 17:00
Bianco: Tsy mbola voatendry hatramin’izao ny Tale Jeneralin’ny Bianco
Mandalo tetezamita ny fitantanana ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na Bianco, taorian’ny tamin’ny 24 jona 2019 nahataperan’ny fe-potoana niasan’ny Tale jeneraly teo aloha, Andriamifidy Jean-Louis.
Ny filoham-pirenena no manendry amin’ny alalan’ny didim-panjakana izay ho Tale jeneralin’ny Bianco, miainga amin’ny tolotra anarana telo alefan’ny komity mpifantina any aminy.
lundi, 22 juillet 2019 16:51
Ady amin’ny kolikoly: Mihetsika ny tanora
Nampiantrano ny fankalazana ny andron'ny tambazotran'ny tanora mandàla ny fahitsiana sy ny fahamarinana ny tanànan’i Miarinarivo Itasy ny 17 jolay teo.
« Tanora Malagasy aho, Tia tanindrazana, mandala ny Fahamarinana », io no lohahevitra novoizin'ireo tanora nandritra ny fankalazana.
lundi, 22 juillet 2019 16:43
Fifidianana: Hiova ny tetiandro handraisana ny dosie firotsahan-kofidiana Ben’ny tanàna
Efa tokony nisokatra ny 20 jolay teo teny anivon’ny OVEC isaky ny Distrika manerana ny Nosy, ary hifarana amin’ny 3 aogositra ny fametrahana antotan-taratasy firotsahan-kofidiana amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna, raha hotanterahina amin’ny 28 oktobra 2019 ihany ny fifidianana, araka ny tolo-kevitry ny CENI.
Mety hisy fiovana anefa io tetiandro voafaritra io noho ny tsy mbola nivoahan’ny didim-panjakana miantso mpifidy handatsa-bato.
lundi, 22 juillet 2019 16:37
Toamasina: Nisy nanafika ny tranon’ny Dr Johanita Ndahimananjara
Tamin’ny iray ora maraina ny sabotsy hifoha ny alahady no niseho ny fanafihana. Noteren’ireo jiolahy hanokatra varavarana ny mpiambina ary voakapoka ny lohany. Nisy ny poa-basy. Lasan’ireo olon-dratsy ny ordinatera entin-tanana iray sy milina fikajiana talohan’ny nahatogavan’ny polisy avy amin’ny sampana vonjitaitra sy ny Zandary.
Minisitra teo aloha ary kandida tao Toamasina I tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, Dr Johanita Ndahimananjara.
Misokatra ny famotorana sy fikarohana ireo olon-dratsy ; nisy olona nampiahiahy nifanena tamin’ny mpitandro ny filaminana teny an-dalana ka nosamborina nanaovana fanadihadiana.
lundi, 22 juillet 2019 15:53
Sosialim-bahoaka: Mitohy ny fitsinjarana ny « Vary Mora »
Mitohy ny fitsinjarana ny « Vary Mora ». Nisy ny fiovana satria raha alarobia sy sabotsy ny fivarotana teo aloha, dia lasa talata sy zoma indray izany, raha ny fandaharam-potoana vaovao. Ho an’ny faritra Analamanga manokana dia anjaran’ny Distrikan’Ambohidratrimo sy Atsimondrano no hisy fizarana.
Ho an’ny rahampitso talata 23 jolay dia eny Amboaroy, Ambodirano, K7, Talatamaty, Tanjondava, Namontana ho an’ny Distrikan’Ambohidratrimo.
Ampanefy, Soalandy, Ampahitrosy, Ambaniala, Antanetikely, Ambavahaditokana, Andranonahoatra, Anosizato Ampefiloha ary Ampitatafika Antsimombohitra kosa ho an’ny eny Antsimondrano.
lundi, 22 juillet 2019 14:19
Kitra - Lalaon’ny Nosy: Antsapaka no hamaritra ny hoavin’ny Barea JIOI
Miankina amin’ny vokatry ny an-tsapaka hatao anio alina ao amin’ny Intercontinental, ao Balaclava no hahafantarana na i Madagasika na Seisela no hanampy an’i Maorisy ao amin’ny Vondrona A, hiakatra amin’ny manasa-dalana amin’ny baolina kitra.
Araka ny andininy faha-8, andalana voalohany, teboka faha 3 amin’ny lalàna mifehy ny fifaninanana amin’ny taranja baolina kitra, dia antsapaka no amantarana izay hanohy ny lalao, raha toa ka mitovy ny isa azon’ny ekipa, mitovy ny elanelan’ny baolina maty sy tafiditra na « Goal average » sy ny isan’ny baolina maty.
Samy manana isa 2, rehefa samy nanao ady sahala 2 avy, taorian’ny lalao 2 vitany avy i Madagasika sy Seychelles.
Samy nahatafiditra baolina 1 avy ; ary samy 0 ny « Goal average ».